Gbasara Anyị - TC Manufacturer
TC bụ ọkachamara technology enterprise ọkachamara R & D, mmepụta na ahịa nke LCD & OLED ngosi ihuenyo maka ekwentị mkpanaaka. Ọ bụ ugbu a otu n'ime ndị isi na-emepụta nke ngosi ihuenyo na ekwentị mkpanaaka ngwa ahịa na China.
TC nwere ihe karịrị ndị ọrụ 500 na ihe karịrị 5,000 square mita ogbako ebe ugbu a, ha niile bụ ndị na-enweghị ntụ, ebe obibi okpomọkụ na iru mmiri oge niile, gụnyere ihe karịrị 1,000 square mita 100 klas na-enweghị ebe obibi. The ụlọ ọrụ nwere ike oru na management otu, gụnyere ihe karịrị 20 R & D otu òtù, e nwere ihe karịrị 50 ọkachamara injinia na nhazi, akụrụngwa na àgwà.
Companylọ ọrụ ahụ nwere 4 COG na-akpaghị aka, FOG mmepụta ahịrị, ahịrị 5 na-akpachapụ akpaka, 4 akpaka na-ezukọ azụ ọkụ, yana mbupu kwa ọnwa nke ngwaahịa 800K, ngwa ngwa ngwa ngwa nwere ike hụ na ịdị mma yana njikwa ngwaahịa.
TC na-emejuputa sistemụ njikwa njikwa siri ike, merie ntụkwasị obi na otuto sitere n'aka ndị ahịa na teknụzụ mmepụta teknụzụ, ogo ngwaahịa dị mma na ọrụ ọkachamara, ma guzobe mmekọrịta dị ogologo oge yana ọtụtụ ndị na-emepụta ụlọ na ndị si mba ọzọ. Site na nyocha na njikarịcha ugboro ugboro, ngwaahịa TC eruola ọkwa ụlọ ọrụ na-eduga n'igosipụta ngosipụta, ụcha agba, saturation, ilele ikiri na ihe ngosi ndị ọzọ.
TC na-agbaso ụkpụrụ nke "ọrụ ọkachamara ọkachamara mbụ maka ndị ahịa, ngwaahịa ndị pụtara ìhè na-akwụghachi ndị ahịa", yana ụkpụrụ nke "ijere gị ozi site na iji obi dum, ọrụ ọkachamara na ọrụ raara onwe ya nye", anyị na-agba mbọ iji wuo ụdị TC, ma nwee ọkachamara VIP ọrụ docking ọrụ maka ọ bụla ahịa, na tozuru etozu azụmahịa ngwọta ike, ma na-enwe a aha ọma na otu ụlọ ọrụ.
TC ji obi ụtọ nabata ọbịbịa gị na nduzi gị, ma nwee olile anya ịmekọrịta mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na gị. Ka na-echegbu onwe gị banyere ụdị ngwaahịa a? Ka na-agba ọsọ na mgbe ahịa nke ngwaahịa a? Biko hapuru anyi nsogbu gi. Companylọ ọrụ ahụ na-atụsi anya ọbịbịa gị ike, na-anabata ndụmọdụ na nkwado gị. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịhọrọ ọkachamara otu, ọrụ dị elu, ngwaahịa mbụ, kedu ihe ị na-eche, biko kpọtụrụ anyị! Daalụ!